कल्पनाभन्दा केहि पर ः बेनीदेखि सोर्मार्कासम्म
चार पाच घण्टाको आराम पछाडि हन्सले हामीलाई हाम्रो गन्तव्य स्थल सोर्मार्कामा जाने समय भएको बताए । मनमा अनेकन जिज्ञासाहरू उठिरहेका थिए । एक प्रकारको कौतुहुलता मनमा जागिरहेको थियो । हवाई यात्राको सम्पूर्ण थकान ओश्लोका सडकमा हिडिरहँदा त्यहाँ भएको हिउँको दृश्यले सम्पूर्ण रुपमा नामेट भएको अनुभूति भैरहेको थियो । तथापि बादलले टम्म ढाकिएको आकाशबाट सूर्यको छिद्र ताप मात्र हामीसम्म आइपुगेको थियो । हामीलाई एकदम समयभित्र बस टर्मिनलसम्म पुग्नु आवश्यक थियो । तर हिउँले चम्किरहेका ओश्लोका सडक, पुल, भवन, उद्योग, स्टेडियम, मार्केट स्क्वायर अनि वनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्विर खिच्ने अवसरलाई मैले हतास मुडमा गुमाउन चाहिन । मेरो अनुरोध पछि हन्स र प्रजुहरु पनि तस्विर लिन राजी भए । त्यो जेब्रा क्रसिङ्ग थियो र म जेब्रा कसिङ्ग पार गर्नै लाग्दा एउटा कार आएको देखिएपछि टक्क रोकिए । कार आफ्नो गतिमा आइरहेको थियो । तर अचम्म कार रोकेर, चालकले पहिला मलाई बाटो पार गर्न इशारा दिए । म छक्क परेँ त्यहाँको सडक अनुशासन देखेर । हाम्रोमा सवारी हाक्नेहरू सडकका सर्वेसर्वा मानिन्छन् । मानौं सडक खाली नहुन्ज्याल वा ढुक्कसँग सडक पार गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मनमा उत्पन्न नहुन्ज्याल हामी पैदल यात्री सडकको एक किनारामा किञ्चित उभिराखेको हुनुपर्छ, लाग्छ हाम्रा कुनै गन्तव्य नै छैनन् ! जे जति गन्तव्य छन् वा जे जति व्यस्त छन् सवारीमा सवार मानिसहरू मात्र ! पैदलयात्रीलाई फुटपाथमा हिड्ने बाहेक केही कहिल्यै सोचिदैन् । अर्थात हामी पैदलयात्रीहरू सवारीमा सवारहरुका लागि फुटपाथे बाहेक अर्थोक केहि होइनौं ! सडक पार गरी आकाशे पुलमा पुगेर एउटा तस्बिर नखिचुन्जेल मेरो दिमागमा जेब्रा क्रसिङ्ग, दु्रत गतिको कार, मलाई पहिला बाटो पार गर्न इशारा गर्ने ती ड्राइभर र मैले पालन गर्न खोजेको मैले सिकेको मेरो सडक अनुशासन एकतमास मनमा नाचिरह्यो । हामी रेल टर्मिनलमा आईपुगि सकेका थियौं । त्यहाँको दृश्य\_परिदृश्य देखेर म छक्क परेँ । के थिएन त्यो टर्मिनलमा ? सपिङ्ग मलदेखि रेष्टुँरा सम्म, मनि एक्सचेन्जदेखि साइबर क्याफेसम्म । हामी त्यहाँ केहि समय साइबर क्याफेमा समय व्यतित गर्न छि¥यौं । हन्सले हामीलाई क्याफेमा छोडेर हाम्रो गन्तब्य सम्मका लागि बस कुन स्टपबाट लाग्छ भन्ने बुझ्नका लागि कतै गएका थिए । लगभग २० मिनेट पछि उनी हामी भएको ठाउँमा फर्केर आए । र, हामीसँग अझ अरु केहि घण्टा बाँकी रहेको बताए । त्यतिन्जेलसम्म हामीलाई मज्जासँग साइबर संसारमा रम्न सकिने बताउँदै हाम्रा लागि केहि खानेकुरा लिन गए । हाम्रा जति जति पलहरु उनीसँग गुज्रदै थिए, उनी त्यति त्यति नै हाम्रा असल र सहयोगी मित्र भएको महशुस हामीलाई हुँदै गएको थियो । केहि समयपछि उनी हातभरी नर्बेजियन मिठाईहरु लिएर हाम्रो सामु आए । हामी तीनै मिठाई खाँदै पूरा नभएको आफ्नो अनलाइन कोर्स पूरा गर्न तर्फ लाग्यौं । र, उनी त्यही अनलाइन कोर्स पूरा गर्नका लागि राती अबेरसम्म बसेको बताउँदै केहि छिनका लागि मस्त आराम गर्न तर्फ लागे । सोर्मार्कासम्म लाग्ने बसका लागि बस स्टप पुग्न त्यहाँबाट करिब २० मिनेटको पैदल यात्रा लाग्ने कुरा बताउँदै अब त्यसतर्फ जानु पर्ने बताउँदै उनी हतारिन थाले । हामी चाहिँ क्याफे काउन्टरमा रकम भुक्तानी गर्ने चटारोमा थियौं । क्याफे सञ्चालकले लगभग तीन घण्टाजति नेट प्रयोगको लागि ३२० क्रोनको हिसाब देखाए । र, भुक्तानीको रकम क्रोनमा बाहेक अरुमा नहुने पनि जानकारी दिए । तर हामीसँग यूरो र डलर बाहेक अरु केहि थिएन् । मैले मनमनै हिसाब निकाले प्रति घण्टा नेपाली एकहजार भन्दा केहि सय बढी ! त्यो रकम पनि उनै हन्सले तिरिदिए । हामीले पछाडी नर्बेजियन क्रोन साटेपछि उनलाई त्यो रकम फिर्ता गर्न खोज्यौ, अहँ उनले त्यो रकम फिर्ता लिन मानेनन् । म बढो विस्मयमा परे, यो कस्तो साथी भेट्यौ हामीले ? देवदूत त होइनन् यी साथीको भेषमा ! हामीहरूले मान्छेले लगभग खचाखच भएको टर्मिनललाई छाडेर बिस्तारै सुनसान सडकहुँदै बस स्टपसम्मका लागि आफ्नो यात्रा शुरु गरिसकेका थियौं । सायद कामबाट फर्कने समय भएको भएर पनि होला सडकमा मान्छेहरुको चाप अलि बढी नै देखिएको थियो । करिब १५–२० मिनेटको पैदल यात्रा पश्चात ः हामीहरू बसस्टपमा आईपुगेका थियौं । र, त्यो सोर्मार्काका लागि अन्तिम बस थियो । बस आइपुग्न अझ केहि मिनेट बाँकी रहेकाले हामीले केहिसमय बस स्टपमै बिताउनु पर्ने भयो । यसैबिचमा मलाई चर्पिको आवश्यकता बोध भएपछि हन्सलाई चर्पि खोज्न सहयोग मागे । उनले मलाई शौचालय भएको स्थानसम्म पुर्‍याए । तर अचम्म चर्पिको त्यो विद्युतिय ढोकाबाट छिर्नु भन्दा पहिले एउटा सिक्का निर्दिष्ट गरिएको स्थानमा छिराउनु पर्ने रहेछ । हन्सले थुप्रै पटक प्रयास गरे, तर ढोका खुलेन् । मलाई यता अति नै भैसकेको थियो । जुन कुरा उनले मेरो भावभंगिमा देखेर अड्कल काटिसकेको हुनुपर्छ ! सायद ममा बढ्दै गएको असहजतालाई बोध गरेर हुनुपर्छ उनी झन हतारमा थिए । केहि समय पछि उनले पत्ता लगाए, त्यहाँ त १० क्रोनको सिक्का चाहिँदो रहेछ ! तर दुर्भाग्यवश ः उनीसँग १० क्रोनको सिक्का उपलब्ध थिएन् । उनले शौचालयमा आएका एक नर्वेजियन युवालाई आफ्नै भाषामा केहि भने, उसले २ वटा सिक्का दियो । हन्सले उसलाई एउटा अर्को सिक्का दिए । त्यो युवकले दिएको एउटा सिक्का निर्दिष्ट गरेको स्थानमा राखिसकेपछि उनले मलाई ढोकातर्फ जान औल्याए । र, म सरासर शौचालयभित्र छिरे । शौचालयभित्र थुप्रै तर्कनाहरु आउने जाने भई नै रहे । सबै थोक यसरी कति व्यवस्थित गर्न सकेका यिनीहरुले ? यिनीहरुले विकासमा कत्रो उन्नती गरेका भन्नेको सानो उदाहरण हाम्रा लागि यिनका शौचालय पनि हुन सक्लान् भन्ने मैले जिन्दगीमा अझैसम्म एक पटक पनि चिताएको थिइन् । शौचालयबाट निस्कनु अघिसम्म मलाई लाग्यो, हामी सगरमाथाको उचाई र लुम्बिनीको ऐतिहासिकतामा गर्व गर्नु सिवाय विकासका आधुनिक पाटाहरूलाई किन नजिकैबाट स्पर्श गर्न सकिरहेका छैनौं ?! हन्स म आउने प्रतिक्षामा ढोकाबाहिर यताउति गरी समय टोपलिरहेका रहेछन् । हामी बसस्टपमा अन्तिम प्रहरमा थियौं । बस तोकिएकै समयमै स्ट्याण्डमा आईपुग्यो । हामी हतारिदैं बसभित्र छिर्‍यौं । फेरि पनि हन्सले हामी दुईजनाको लागि १०० क्रोन खर्च गर्नु पर्‍यो । बसभित्र हामीले उक्त तालिमका लागि सहभागिताका लागि जान लागेका अर्का दुई नर्वेजियन युवतीहरू पनि भेट्यौ, क्याथ्रिन र एली ।